I-19 yasimahla ye-HTML kunye ne-CSS izilayidi kwiwebhusayithi yakho | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukuba iiwebhusayithi ezithatha bonke ububanzi besikriniSifumanise ukuba izinto ezithile zinokudityaniswa ezinokuthi zingene ngokufanelekileyo ukubonisa isampulu yonke yeemveliso ezithengiswayo okanye iihambo esinokuzinikela ehlotyeni. Iicarousels okanye izilayida zezinye zezinto zewebhu ezisivumela ukuba sibonise iimveliso zethu ngendlela ebambekayo.
1 Carousels ethe tye
2 Ukuphendula i-carousel engenasiphelo
3 Phendula iCarousel
4 Isilayidi se-3D esigudileyo
5 I-carousel engenasiphelo ngokuzenzekelayo
6 Ukuhamba ngeCarousel
7 Iselfowuni yeCarousel
8 Ukutya kwe-Instagram Carousel
9 I-carousel elula ehambelanayo
10 I-3D carousels ethe tyaba
11 I-CSS Carousel
12 I-Ambilight Bootstrap Carousel
13 Iqela leCarousel
14 ICarousel Cube
15 Izitshixo zeCarousel
16 Carousels nkqo
17 I-CSS Carousel ecocekileyo
18 I-carousel ebonakalayo isabela
19 I-3D yahlula iCarousel
Carousels ethe tye
Le carousel iqulathe oopopayi abahle ngokungathi besizobela ikhethini, ukusondeza nje iifoto kunye neempawu zeeprofayili esiza kuziseka kwesi silayida. I-carousel egqibeleleyo yobungqina obuvela kubasebenzisi abonelisekileyo kakhulu ziimveliso esizithengisayo kwiwebhu.
Ukuphendula i-carousel engenasiphelo
Esi sisilayidi njengentengiso enokuthi ngamanye amaxesha ibonakale kumabala ebhola ekhatywayo emacaleni kwaye abonisa iintengiso ezahlukeneyo ezihamba ngokuthe tye. Kukulungele ukufika kwamaphepha ekufuneka abonise amaqabane ophawu kunye nezinye iintlobo zeelogo.
Lo msongo ime ngeReact yayo. ezibolekisa ekuboniseni imifanekiso ngobukhulu ngokulingana njengoko sisuka kumfanekiso omnye sisiya komnye kwimifanekiso eshukumayo eqhubekayo. Akukho nto ingako sinokuyithetha ngale CSS ilula, kodwa sisiphumo esihle ukuba siyayazi ukuba siyibeka njani ngokufanelekileyo kwiwebhu.
Isilayidi se-3D esigudileyo
Isilayida esithi, njengoko igama laso lilumkisa, siboniswe ngokuzenzekelayo ngaphandle komsebenzisi kufuneka asebenzisane akukho xesha naye. Imifanekiso eyahlukeneyo eyenza le carousel ibonakalayo ivela ngenxa yotshintsho apho iphela ngomlingo.
Ngento yokuhambisa phezulu oku isilayida sihamba ukusuka ekhohlo ukuya ekunene, okanye ngokuchaseneyo, njengoko sishiya isikhombisi semouse ngaphezulu kwayo. Utshintsho olugudileyo lokuhamba phakathi kweefoto ezahlukeneyo ezinokwenza lo mfanekiso wesilayidi.
Kwakhona ebizwa ngokuba yiCarousel Material Design, kunye nentsingiselo yangoku nazo zonke iintlobo zamakhadi, apha unokufumana elinye inqaku elinenani elikhulu labo kwi-CSS / HTML, iyazihlukanisa nabanye ngokwenziwa kolwimi loyilo olupapashwe nguGoogle. Ungahambisa amakhadi ahlukeneyo ngokucinezela ixesha elide kumakhadi.
Ukutya kwe-Instagram Carousel
Ungaluphazamisa uluvo olungemva kwesilayidi esiqaqambileyo ngemizobo yemifanekiso enokwandiswa ngokunqakraza kwenye yazo. Oopopayi besiphumo esihle, nangona senzelwe uhlobo oluthile lwewebhusayithi. Izithuba ze-Instagram zisiwe kwi-slick.js carousel.
I-carousel elula ehambelanayo
Inokwenza okuninzi kunye neyangaphambili, ngakumbi kwimigca yemifanekiso, nangona Ukusebenzisana nesilayidi kwahluke kakhulu ngokuyihambisa ngakwicala lesandla elisecaleni ukusuka ekhohlo ukuya ekunene nangokuchaseneyo. Kwakhona sine-slick.js esenza into yayo. Ukutsala umphumo wayo omkhulu.
I-3D carousels ethe tyaba
Enye yezona carousels zinomdla kulo lonke uluhlu esilupapashayo. Ukuma ngaphandle kwe- izilayida zakho ezithe tyaba kwi-CSS nakwi-HTML ezihamba kakuhle. Kuya kufuneka ushiye isikhombisi semouse ngaphezulu kweebhokisi ukufumana iziphumo ezahlukeneyo ezinokuthi ziveliswe ngeendlela ezine ezahlukeneyo.
Ilula kwaye inkulu imbonakalo ebonakalayo nge uthotho lwamakhadi atshintshanayo ngaphambili. Iziphumo zikwi-3D, ke yenye yezi zityibilikisi ezitsala umdla omkhulu, ngakumbi ngenxa yesiphumo esincinci sesiphambeko esibonisa ubuhlakani kwinxalenye yomdali ofanayo.
I-Ambilight Bootstrap Carousel
Isilayida esilula esinempembelelo enkulu esingabonakali kakhulu kuninzi. Ngaba yenye ye ezo zityibilika zilula esihlala sijonge kwaye esinika imvakalelo yokuba yinto enye ngaphandle kovuyo olukhulu, kodwa oko kuwufezekisa ngokugqibeleleyo umsebenzi wawo.
Ukuba ufuna ukwazisa iqela lokuhlela onalo kwibhlog, isilayida sigqibelele kwindima yaso. Kulungile kufana naleya yangaphambili ngendlela elula ngayo. Kuyacaca ukuba kusetyenziswa iidayimani ukugcina imifanekiso yeqela ngalinye. Inokudlala ngokuzenzekelayo.
Isilayida esime ngaphandle ukuba sityhubhu apho ubuso bobuso bobunye bomfanekiso okanye iifoto esifuna ukuzibonisa kwiwebhusayithi. Kuya kufuneka ucofe nganye nganye ukuhambisa kwaye ufumanise ukuba yeyiphi na into ekulindeleyo.
Isilayidi apho unxibelelwano luhamba khona usebenzisa izitshixo zotolo. Ilula ngaphandle kwempumelelo enkulu eya ngqo kolunye uhlobo lonxibelelwano, enye ebonakala ngathi yiminyaka edlulileyo. Ukusetyenziswa okuthile.
Isilayidi esinefuthe lokubonwayo ngokuzenzekelayo udlala oopopayi nkqo ngokuqhubekayo omele amakhadi ayo aneekona ezijikeleziweyo. Okwangoku kunye nenye yezo zinto zizimeleyo zolu luhlu.
I-CSS Carousel ecocekileyo
Le carousel ime ngokuba ne imenyu esecaleni esinokuya kuyo ukunqakraza kukhetho ngalunye. Ulwazi lubonakala ngesiphumo esiphumeleleyo sokufumana ngaphandle kokungaphezulu koko bekutshiwo.
I-carousel ebonakalayo isabela
Ifana ne yangaphambili yokuma nkqo kwayo, nangona esi silayida sikwazi ukuthatha ububanzi bephepha lonke ukubonisa imifanekiso yetab nganye. Inomdla kwifomathi yayo enkulu kunye nokusetyenziswa kweenguqu zeCSS kwisilayidi phakathi kwezilayidi.
I-3D yahlula iCarousel
Iziphumo ezibonakalayo ezintle zinepateni yesilayida esijikeleza kwi3D nge oopopayi abaqaqambe kakhulu. Unokukhetha ukhetho ngalunye kwimenyu yecala lasekhohlo ngamachaphaza nganye nganye. Enye yezona zinto zibalaseleyo kuluhlu lwendlela yokuyila.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Bugcisa » CSS » I-19 isilayida okanye i-carousels CSS kunye ne-HTML kwiwebhusayithi yakho
Mayra orellana sitsho
Molo, ndifuna ukusebenzisa i-CSS yeCarousel eyiyo kwindawo yam, kodwa ikwindawo enye kuphela, ndingayenza njani ukuba ibekwe kwindawo endifuna kuyo kwiphepha lam.
Nceda uncede ngale nto Enkosi kakhulu
Phendula uMayra Orellana
Xavier Cañizares sitsho
Ndingayenza njani iHover Carousel bonise kakuhle kuhlobo lweselfowuni lwewebhusayithi yam?
Phendula kuXavier Cañizares
Ukugqwesa, mhle kangakanani umsebenzi abawenzileyo!
Tony zambrano sitsho
Molo, izindlu zenqwelomoya zipholile kakhulu, kodwa nje ukuba ndiyilayishe, ndiyikope kwaye ndiyincamathisele, ijavascrip indinika impazamo ngenxa ye-var max = $ ('# c> li) .lenght…. Ucebisa ntoni
Phendula kwi-tony zambrano
Isixhobo esitsha sokucofa into seFotohop CC ngoku siyafumaneka